Ndị Mayan na amụma nke njedebe nke ụwa - Mexico - 1aviagem.com
Gara aga post: Pilanesberg Park - safari foto na nkuzi anumanu - South Africa
Ozo ozo: njem nke ubochi ato nke Bariloche - Argentina
Edebere Ọnwa abụọ gara aga site Römulo Lucena
Gịnị ka ndị Mayan ga-akụziri anyị gbasara ọgwụgwụ ụwa?
N'oge ụfọdụ gara aga, na 2012, ọtụtụ ndị nụrụ banyere njedebe nke ụwa. A zụlitere ọtụtụ ihe omimi gburugburu mmepeanya Mayan. E kwuwerị, asịrị ahụ kwuru na dị ka kalenda Mayan ụwa ga-akwụsị na 2012!
Ole ndi bu ndi Mayan?
Ndi Mayans so n’otu n’ime mmepe ndi kachasi elu n’oge ha. Ha bụ otu n'ime ndị mbụ ghọtara na usoro ọchịchị nwere ikike karịrị nke mmadụ lekwasịrị anya na eze. Otu a, n’obodo ha, onye obula ya na onye isi ya haziri.
Ndị Maya toro eto nke ukwuu:
Ha nwere ederede nke ha. Nke ahụ nọchiri anya asụsụ a na-asụ.
Ha nwere usoro nọmba ha
Ha nwere kalenda nke ha
Ha bụ ezigbo ndị nna ochie.
Naanị mmadụ abụọ nọ n'ụwa mepụtara ihe ngosi anya maka ọnụọgụgụ ahụ ma ọ bụ "0". Ndị Hindu nọ na India, bụ ndị mechara sonye na usoro Arab (ya bụ ọnụọgụ Indo-Arabic). Na ndị Maya.
Ejirila anyị ka anyị jiri ntọala 10, ma ọ bụ usoro ntụpọ. nọmba ndị ahụ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
Ndị Maya na-eji ntọala 20 ma ọ bụ vigesimal. dị ka foto:
Oleekwa ihe na-atọ ụtọ na nke ahụ?
Ihe na-atọ ọchị banyere nke a bụ na sistemụ Mayan dị mfe mmụta ma ejiri echiche nke mkpịsị aka anyị mee ya.
Uche a buru oke ibu n’ihi na ọ bụ akụkụ nke ihe kachasị mkpa anyị kwesịrị ịgwa, mkpịsị aka anyị. Ọ bụ mmadụ gbadoro ụkwụ. Echere m na nke a kwesịrị ịbụ usoro anyị dị ugbu a. Ha jiri 1 na 5 na-anọchi anya mkpịsị aka nke onye otu ahụ. ma nwee ike ịgụta mmadụ 20 mfe iji naanị ntụpọ na ahịrị! Na mgbakwunye na ha nọchiri anya efu (nke dị ka ịbịaru achịcha achịcha) Yabụ ị ga - eche n'echiche ma ọ bụrụ na anyị ga - eme ihe anyị na - agụta site na 0 ruo 9, chee na - agụta na 0 ruo 20. Ọ ga-abụ ikike okpukpu abụọ.
Itinye ihe a na kalenda Mayan
Ọ dị mma ịmara na kalenda Mayan n'ezie nwere ọtụtụ kalenda. Chegodi ya dika ihe eji eme ihe.
1- kalenda Tzolk'in (tzolkyn)
Nke a ga-abụ wiil kasị nta nke dabara ụbọchị 260. A na-aguta ụbọchị iri na atọ n'ime otu dị na 13. na ọtụtụ 20 x 13 = 20.
Fọdụ na-ekwu na emere oge a dabere na afọ ime ụmụ nwanyị. gua site na ubochi nke ihe mbu mere dika aturu. Kedu ihe mere kalenda Mayan a dị ka ọnwa 8,6. Ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ ụbọchị 260 bụ ụbọchị ọ ga-awa anyanwụ ịpụta ugboro abụọ n'otu ebe dị na mbara igwe. (Zenith) Nke a ga - abụ mmalite nke ụbọchị 2.
2- Haab (kalenda afọ Mayan)
Nke a ga - abụ ụbọchị kacha nso na kalenda afọ anyị.
Mgbe ọnwa iri na asatọ! Mana ọnwa ọbụla nwere naanị ụbọchị iri abụọ. Otutu 18 x 20 = 18. (Therenụ ebe ahụ) na-etu ọnụ maka ịnata ụgwọ ọnwa nke iri na atọ! A na-akwụ ndị Mayans ụgwọ ọnwa 20! Hahaha). Ebee kwa ka ụbọchị ise na-efu efu dị n'afọ? A na-akpọ ụbọchị ndị a na kalenda nke Mayan, ha bụ ụbọchị Afọ Ọhụrụ mgbe ha buru amụma ma ọ ga-abụ ma ọ bụ ọtụtụ chi ga-enwe. Ọ ga-abụ ụbọchị mgbe ọnụ ụzọ mbata nke ụwa ọzọ ga-emeghe. Chi ndị a nwere ike ịgagharị ma gọzie ma ọ bụ kọchaa ụwa dị ndụ.
Ya mere, oge Maya na-agụta na kalenda ụbọchị 260 x 365 yana ngwakọta ndị ga-ewe ihe dị ka afọ 52 iji nwee ike ikwughachi onwe ha. Ọ bụ ihe ịtụnanya ịmara na afọ 52 ka ọ dị ntakịrị karịa ndụ mmadụ na-atụ anya ya. mgbe ahu kalenda gi gha amalite igu onu site n’oge di ime gi na ndu nke ije g’aru rue mgbe onwu gi n’enweghi ikwughachi onwe ya otu ugboro. N'ezie, enwere ihe ndị a na-enweghị ike. Ma ekele diri ndị okenye nke ụbọchị gafere afọ 52 (kalenda Haab) ọ dị mkpa ịgbakwunye wiil ọzọ na kalenda.
3- Nnukwu usoro.
A kpọghị ha ndị nwenụ oge n'efu. Iji wee kọọ ihe omume, iwe ihe ubi na iji nwee ike idekọ akụkọ ihe mere eme, ha mepụtara otu wiil buru ibu, nke a na-akpọ Baktun (b'ak'tun) nke dere ihe dị ka afọ 400 (394,3 karịa nke ọma)
Na njedebe nke ụwa?
Ugbu a ị ghọtara na kalenda Mayan na-arụ ọrụ dị ka ngagharị, dị ka ọrụ elekere, anyị na-abịa emume a kara akara "njedebe nke ụwa". Site na ịdebanye oge na oge niile na kalenda Gregorian anyị, anyị ruru ụbọchị nke ọnwa iri na abụọ nke ọnwa iri na abụọ nke afọ 21. Nke ahụ abụghị ihe ọzọ karịa itinye kalịnda atọ bidoro usoro ọhụụ dị ihe dịka afọ 2012. Nke bukwara akara mmalite mmalite okirikiri nke 3 afọ.
N’okpuru, aga m ahapụ ụbọchị ahụ mgbe enwere mmezi a n’agbata nche, ogologo oge na nke dị mkpirikpi. Yabụ na already jikerela maka njedebe ụwa nke ụwa (ọ bụrụ na ị dị ndụ n'oge ahụ, ọ bụ eziokwu?!).
Mkpa aka: Ndi Mayans tụlekwara oke nke ike n’etiti ndi nwoke na ndi nwanyi nke mere n’ime onwa ato n’iile. Nke a bụ nkwekọ ya na ịkọ oge dabere na nyocha nke usoro gara aga ma si otú a buru amụma ọdịnihu. Na mbido okirikiri 400 ma ọ bụ nke ahụ ga-akwụsị na Disemba 13.0.0.0, 21. Ike nwanyị ga-ebido na nke ga-achị 2012 afọ. (400 afọ)
Ugbu a naanị iji mee ka ntutu gị dịkwuo elu, ka anyị leba anya n'ọdịmikọ nke nwanyi?
1- Germany: Angela Merkel (2005 ruo taa)
2- Ajentina: Cristina Kirchner (2007 rue 2015)
3- Brazil: Dilma Rousseff (2011 rue 2016)
3- Chile: Michelle Bachelet (2006 rue 2018)
4- Kosovo: Atifete Jahjaga (2011 rue 2016)
5- Malawi: Joyce Banda (2012 rue 2014)
Agam akwusi ihe ndia n’ebe a, ihe omuma atu ole na ole banyere otu esi abia na Disemba 21, 12, ndi umunwanyi ndi no n’ike. Kedu nke bụ mmalite mmalite nke ịrịgo nwanyị dị ka nguzozi nke usoro ihe omume Mayan.
Ọ bụ n'ihi na abanyeghị m n'ụwa nke fim. (Captain Marvel, Wonder Woman, Rey Skywalker… M na-ahapụrụ ya onye ọ bụla chọrọ itinyekwu aka na ndepụta ndị a). 😎
Ngụgụ ogologo (njedebe nke ụwa)
0.0.0.0.0 Ọgọstụ 11, 3114 BC
1.0.0.0.0 Nọvemba 13, 2720 BC
2.0.0.0.0 Febụwarị 16, 2325 BC
3.0.0.0.0 Mee 21, 1931 BC
4.0.0.0.0 Ọgọstụ 23, 1537 BC
5.0.0.0.0 Nọvemba 26, 1143 BC
6.0.0.0.0 Febụwarị 28, 748 BC
8.0.0.0.0 Septemba 5, 41 AD
10.0.0.0.0 13 March 830
12.0.0.0.0 18 1618 maka September
14.0.0.0.0 26 March 2407
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, kesaa ya ebe ahụ! Ma ọ bụ soro anyị na bọtịnụ uhie dị ebe ahụ.
akụkọ ihe mere eme kalenda okirikiri njedebe nke ụwa Ndị Maya Mexico